Igadi yaseNaipi - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguElsa
Indlu yethu iphakathi kwegadi entle, ejikelezwe yindalo eninzi, iidiliya, iiorchids, iiferns, ezisivumela ukuba sinandiphe ukutyelela kweentaka nezinambuzane ezahlukahlukeneyo.
Le ndlu inesolar panel yokubonelela ngamanzi ashushu, yaye sijikelezwe ziifestile ezinkulu ezisikhanyisela ngokwendalo emini. Senza izenzo ezihambelana nokusingqongileyo, inkunkuma eyahlukileyo, ukuhamba ngebhayisikili, ukunyamekela ukusetyenziswa kwamanzi, njl.
Yindlu enkulu, ekhethekileyo yeendwendwe, apho amagumbi aqeshwayo, kunye nekhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, i-balcony ekhethekileyo yokujonga i-hummingbirds, njl. Thina, uJusto, noElsa sihlala ebumelwaneni, kwakwindawo enye, ngaloo ndlela sinokunceda xa kuyimfuneko.
Indlu yethu ikwindawo ezolileyo imizuzu engama-20 ukusuka kumbindi wesixeko, kwaye iimitha ezimbalwa ukusuka kumda ophindwe kathathu apho ihlangana khona imilambo i-Iguazú neParaná.
Molo, singu-Elsa kunye noJusto, umkhokeli kunye nomgcini wepaki yee-Iguazú Falls, abathandi bendalo kunye neengcali zezityalo.
sinikezela ngekofu yasimahla, iiti ezahlukeneyo, iswekile kunye nobisi kwisidlo sakusasa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Puerto Iguazú